आज विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाइँदै - SudurSanchar
आज विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । कन्या अर्थात् आश्विन सङ्क्रान्तिकादिन आज कालिगडले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन् ।
विश्वकर्मा प्रकाश नामक वास्तु शास्त्रको ग्रन्थ उहाँले नै तयार पार्नुभएको विश्वास गरिने वास्तुशास्त्री शिव पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
चार उपवेदमध्येको एक स्थापत्यवेदमा वास्तुकै विषय उल्लेख गरिएको छ । लुप्तप्रायः भएको स्थापत्य वेदमा आधारित सहर एवं आवास निर्माण गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
टीका लाउदा यसरि धरधरि रोएकि अनितालाई भेट्न घरमै आए स्कुल पढ्दाका साथि ,यसरी भलाकुसारि गरिन् (हेर्नुस् भिडियो )
आहा ! बिदेशी घानाका युवक र नेपाली चेलि बुढाबुढिले यसरी मनाए दशै (हेर्नुस् भिडियो)
आहा ! दशैमा यसरी घर रङ्गाए बिनोदले ,यसरी खेत जोते, अनितालाई यसरी गित गाएर हँसाए (हेर्नुस् भिडियो)
अन्ततः गायिका टिका सानुले आफ्नो प्रेमीलाई पहिलोपटक यसरी चिनाइन् मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो)
सुर्य खड्का, रविन लामिछाने र सुनिता बुढाको नया सहकार्य ‘कलशैमा पानी’ रातारात भाईरल (भिडियोसहित)